Mudhudhudhu - Wikipedia
Mudhudhudhu (Nge: motorcycle; trike kana ine mavhiri matatu) unonzi futi motabhaiki kana bhaiki, imota ine mavhiri maviri kana matatu. Dhizaini yemudhudhudhu inosiyana zvakanyanya kuti ienderane nemhando yezvinangwa zvakasiyana: kufamba nzendo refu, kuenda chero kunoda kuendwa, kufamba nechikepe, maspoti (kusanganisira mijaho), uye kukwira kunze kwemugwagwa. Kuchovha mudhudhudhu ndiko kutyairwa kwemhando ye mota iyi, uye mazwi aya anoshandiswa futi pa maektivhiti ari ezvepanze sekujoinha kirabhu yemudhudhudhu uye kuenda kumisangano evadhudhudhu.
ge of different purposes: long-distance travel, commuting, cruising, sport (including racing), and off-road ridin
Daimler Reitwagen yakagadzirwa muna 1885 na Gottlieb Daimler na Wilhelm Maybach muJerumani ndiyo yaiva yekutanga kupisa mukati (internal combustion), mudhudhudhu inoshandisa peturu pakufamba. Muna 1894, Hildebrand & Wolfmüller vakave vekutanga kugadzira mudhudhudhu.
Pasirose, midhudhudhu inofananidzwa kufarirwa kumota senzira yekufambisa. Muna 2021, midhudhudhu mitsva inosvika 58.6 miriyoni yakatengeswa pasirose. Izvi zvishoma pane hambautare 66.7 miriyoni dzakatengeswa munguva imwe cheteyo.
Muna 2014, vagadziri vatatu vepamusoro midhudhudhu pasi rose nehuwandu hwaive Honda (28%), Yamaha (17%) (vose kubva kuJapani), uye Hero MotoCorp (India). Munyika dzichiri kusimukira, midhudhudhu inoonekwa sekushandisa nekuda kwemitengo yakaderera uye banganhundu re peturu. Pamidhudhudhu yese iri pasirese, 58% ari muEzhiya-Pasifiki uye Maodzanyemba ne marhijoni ekuMabvazuva eEzhiya, kusingasanganisire nyaisamotapakati (mota-centric) Japani.
Maererano neDhipatimende Rezvokufambisa reAmerika, nhamba yenzufu (fatalities) pakiromita imwe neimwe yakafamba yakanga yakakwira neka 37 pamudhudhudhu pane hambautare.
Banganhundu - economy
Peturu, fweri; fueri - fuel
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mudhudhudhu&oldid=94278"
Zvichovhwa zvine mavhiri
This page was last edited on 4 Chivabvu 2022, at 13:01.